BWA022-DEMS07-SET - OMG Digital Evidence Management System ho an'ny BWC090 & BWC089 - Vahaolana OMG
Rindrambaiko momba ny rafitra fitantanana nomerika nomerika OMG
The Rafitra fitantanana porofo nomerika OMG Manamora ny fizotry ny fanangonana porofo amin'ny alàlan'ny fampifandraisana sy ny fianjerana ireo silo data misy ao anaty interface iray. Manome fivarotana iray tokan-trano izy io hanangonana porofo - tsy mila miditra amin'ny rafitra samihafa ny mpanao famotorana na mandeha amin'ny toerana hafa mba hanangonana porofo.
Tsy misy na inona na inona afaka misambotra lohatenim-baovao toy ny fifandraisana mahatsiravina eo amin'ny manampahefan'ny polisy sy mpikambana iray amin'ny vahoaka. Ho an'ny taona maro, ny vokatr'ilay fampiasan'ny polisy dia niharan'ny "hoy izy, nilaza izy fa" adihevitra. Noho ny famolavolana lahatsary avo lenta, mora simba, ny sampan-draharahan'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao dia manana fomba hamahana ireo disadisa ireo. Na tsara kokoa aza, afaka misakana azy tsy hitranga amin'ny toerana voalohany.
Miasa amin'ny governemanta manerana ny firenena ny polisy fa mitafy camera cameras, ary noho ny antony marim-pototra. Amin'ny fakantsarin'ny fakantsarin'ny firaketana ny fifandraisan'ny manampahefana rehetra, ny sampan-draharahan'ny polisy sy ny vahoaka izay manompo dia afaka mamantatra izay nitranga tamin'ny zava-nitranga rehetra.
Raha samy mitondra ireo fakantsary ireo ny polisy rehetra ao amin'ny departemantam-paritra, dia mitombo be ny fitarainana ampahibemaso, toy ny hoe isa-potoan'ny polisy ny mampiasa hery. Izy ireo dia mamorona fotsiny ny andraikitra ilaina ho an'ny antoko rehetra tafiditra amin'ny fahatakarana fa ny zavatra rehetra ataony dia voarakitra ho an'ny taranaka.
OMG Digital Software Management Software [ODEMS]
Samy manana ny fomba fanaovany zavatra ny sampana tsirairay, ary ny teknolojia vaovao dia tsy tokony hanery anao hiasa amin'ny fomba iray. Na ny fomba tianao hidirana amin'ny horonan-tsary, mitahiry angona na mitantana ny antsipiriany rehetra momba ny fampiasana azy.
Mba hahafahan'ireo kamera ireo ho ilaina, dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny rindrambaiko haino aman-jery marina izy ireo, fantatra ihany koa amin'ny DEMS. Ity rindrambaiko ity dia ampiasaina amin'ny fomba maro mba hahazoana antoka fa ny firaketana fakantsary rehetra dia katalaogy sy voatahiry tsara. Misy teboka maromaro maromaro izay tsy maintsy nosoratana marina. Ohatra, ny rindrambaiko dia afaka:
- Araho izay polisy nanao ahoana ny horonan-tsary sy ny ora nanoratana azy
- Tazomy ny metadata isaky ny firaketana, toy ny hoe iza avy ireo mpikambana ao amin'ny departemanta no nijery azy io sy oviana
- Avelao ianao hanisy marika ny horonan-tsary ho porofo amin'ny fanadihadiana mitohy na noho ny fitehirizana tsotra
- Omeo ny mpisolovavan'ny distrikao sy ny mpiasan'izy ireo ny fahaizana hiditra ary hijery horonan-tsary tena ilaina
Ny tombony amin'ny vokatra tracker EMS
Na kapitenin'ny mpitandro filaminana mitady vahaolana vaovao na ny talen'ny IT izay tokony hampihatra azy ireo, ny lojika fitantanana nomerika nomerika dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fanatsarana ny fakan-tsary. Raha tsy misy an'io rindrambaiko io, dia tsy hisy dikany ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana fakan-tsary avo lenta. Ny rafitra fitantanana porofo momba ny fitantanana miaraka amin'ny programa fisorohana Dizitaly dia tsy manam-paharoa satria mamela porofo ara-batana sy ara-nomerika izay mampiseho ny fonja manontolo. Hanana vahaolana iray manontolo ianao amin'ny fitazonana ny andrim-panjakana voatahiry sy ny fahafahana miditra amin'ny fotoana rehetra ilanao azy.
Koa satria ity dia teknolojia vaovao, ny mpanjifa dia afaka mifidy avy amin'ny OMG noho ny filaharany fakan-tsary. Amin'ny teknolojia rehetra, dia mety ho vetivety ihany. Raha vao tsy misy ny teknolojia intsony ny teknolojia, dia tsy maintsy mampiasa vola bebe kokoa hividianana kamera vaovao sy rindrambaiko vaovao hanaraka ny fitaovana vaovao ianao.
- Mampakatra sy manamarina ireo rakitra nomerika rehetra ao anatin'izany ny sary, horonan-tsary, feo, ary rakitra hafa rehetra
- Upload Auto sy ny famandrihana
- Fidirana azo antoka amin'ny rakitra nomerika rehetra
- Fisoratana andraikitra ho an'ireo rakitra nomerika rehetra
- Ny fahafaha-manao fikarohana tsy voafetra
- Sivana tsy voafetra sy sivana haingana
- Rafitra fampandrenesana
- Sary ary fitaterana ny fahafaha-manao pirinty
- Ny fiarovana fiarovana ny mpampiasa
- Fandefasana famafana tsy voafetra
- Ny fahaiza-manao mametra mahery amin'ny tranga mora tohina sy avo lenta
Storage Capacity: Tsia, manohana solosaina, mampiasa kapila solosaina hitehirizana porofo
Fandraisana interface: Micro - fenitra seranana USB * 10
Bokotra fanovana herinaratra: Bokotra ara-batana * 1
USB3.0 interface: USB3.0 * 1
Fampifandraisana herinaratra: AC IN: 220V; 50Hz mihoatra ny fiarovana ny herinaratra, ny fiarovana amin'izao fotoana izao, ny fiarovana ny herinaratra, ny fiarovana faribolana fohy
herin'aratra: Famatsiana herinaratra miova 12V10A namboarina
Fanala: Mpankafy mangatsiaka 12v natsangana * 1
Refy (mm): 350mmm halavany * 240mm sakany * Haavo 100mm